Maalintii uu garsoore Overbo isku xardhay buugga taariikhda! – Gool FM
Maalintii uu garsoore Overbo isku xardhay buugga taariikhda!
Kaafi December 12, 2017
(Europe) 12 Dis 2017. Isku dhacyada Chelsea iyo Barcelona waxa ay noqdeen Europian Clasic kaddib markii kulamadooda looga maaro waayey adeeg iyo muran muddo ka badan 10 sano.
Mararka meelo badan la eego, naceybka Mourinho u qabo Barcelona waxa uu curtay xilligii uu tababaraha u ahaa Chelsea isaga oo ku eedeeyey Lionel Messi mid CIYAAR JILNIIN dheela kolkii ay 2006 is fooda is dareen iyada oo Asier del Horno kaarka cas lagu saaray oo uu ku qaatay qalad uu ku galay Argentinian-ka.
Barcelona waxa ay Chelsea uga siibtay tartanka wareega 16ka iyada oo ku guuleysatay Champions League-ha taas oo ah mid uusan ilaawin Portuguese-ka.
Waxaase jirta hal dhacdo oo waxaas oo dhan ka weyn oo wali la xusuusto kulamada labadan dhinac ma aha Messi, Lampard, Droba, Ronaldinho ama ciyaarhan kale – ee waa garsoore Overbo.
Waxa uu ahaa dhex dhexaadiyihii afar dhammaadkii Champions League-ga ee 2008-09, waxaana caan noqday sawirkii Drogba iyo Ballack ee ay gegida ku dhex ordayeen markii uu garsooraha reer Norway dhigi waayey lix gool ku laad oo ay ku dooday Blues, taasi waxa ay keentay in ciiwanada dunida ay qabsato.
Barcelona ciyaaryahan ayaa ka maqnaa oo waxaa kaarka cas looga saaray Eric Abidal waxa ayna gool dhaliyeen xilli dambe oo uu shabaqa la helay Andres Iniesta , waxa ay kama dambeysta ku garaceen Manchester United – tii Cristiano Ronaldo.
Wixii intaa ka dambeeyey wey adag tahay in a arko garsoore qaladaad heerkaas le’eg galay, walow dhex dhexaadintii Aytekin ee kulankii ay Barcelona gurigeeda ku qaabishay Paris Saint – Germain ololihii hore ku dhawaa.
Ronaldo oo laga saaray Liiska 10-ka Weeraryahan ee ugu shidan Yurub 2017/18
HORDHAC: Manchester United Vs. Bournemouth